Sea stack: အဲဒါက ဘာလဲ၊ လက္ခဏာများ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 10/11/2021 11:01 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် အထူးဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော ဘူမိဗေဒပုံစံအမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသည်။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က ပင်လယ်အစုအဝေး. ၎င်းသည် ကမ်းရိုးတန်းအနီးတွင် ရေများဆုံသည့် ကျောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် အဖြစ်များသည်။ အင်္ဂလိပ်လို Sea Stack လို့ လူသိများပြီး သင်္ဘောသားတွေအတွက် ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် သူတို့ကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိထားရပါမယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ပင်လယ်ရေကန်များအကြောင်း သိလိုသမျှ၊ ၎င်း၏ လက္ခဏာများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 ပင်လယ်စာစုဆိုတာ ဘာလဲ။
ပင်လယ်စာစုများသည် ကမ်းနားရှိ ရေတွင်တွေ့ရသော ကျောက်စာတိုင်များဖြစ်သည်။. အဏ္ဏဝါတိုင်များသည် ကမ္ဘာ့ကမ်းရိုးတန်းများစွာတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး အချို့မှာ အလွန်ကျော်ကြားသည်။ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် အခြားအင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့ပင်၊ ပင်လယ်တောင်ပံများသည် အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေပြီး ပင်လယ်တောင်များတွင် အဆက်မပြတ်ပေါ်လာပြီး အဟောင်းများ ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။ အချို့သော ပင်လယ်ရေကန်များသည် အလွန်ထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အလွှာများအဖြစ်သို့ ပြိုကျနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့် ပန်းချီဆရာများအတွက် ရေပန်းစားသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း ကောင်းစွာသိရှိထားသည်။
ကမ်းရိုးတန်း ကုန်းမြေများ သဘာဝအလျောက် တိုက်စားမှုကြောင့် ပင်လယ်ရေများ စုပုံလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သမုဒ္ဒရာသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြည်းညှင်းစွာ ချဲ့ထွင်လာစေရန် အရင်းအမြစ်ရှိ အပေါက်တစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မုခ်သည် ပြိုကျပြီး တစ်ဖက်တွင် ပင်လယ်စာစုတစ်ခုနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် အုတ်တံတိုင်းတစ်ခု ကျန်ခဲ့သည်။ ကမ်းရိုးတန်းမှ ခွဲထုတ်ပြီးနောက်၊ ပင်လယ်ရေသည် တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းလာပြီး ရေထဲသို့ အရည်ပျော်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုကျလာမည်ဖြစ်သည်။
အနှစ်သာရအားဖြင့် ပင်လယ်ရေကန်သည် အလွန်သေးငယ်သော ကျွန်းနှင့်တူသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ပင်လယ်စုန်သည် အမှန်တကယ်ပင် ပျောက်ကွယ်သွားသော ကျွန်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းငှက်များစွာသည် အသိုက်များနှင့် အမိုးအကာများတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပင်လယ်ရေကန်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အထီးကျန်မှုနှင့် ဆွေမျိုးလုံခြုံရေးကို တန်ဖိုးထားကြသည်။ Sea stacks များသည် တောင်တက်သမားများအတွက် အလွန်ရေပန်းစားပြီး၊ ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော စိန်ခေါ်မှုများကို ယူဆောင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အငူငှာပုံစံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် လွှမ်းမိုးနေသော ရေစီးကြောင်းပေါ် မူတည်၍ ဧရိယာအတွင်း ပင်လယ်ရေစုပုံများ ဖြန့်ကျက်မှု ကွဲပြားသည်။ တချို့ကိစ္စတွေ၊ အလွန်မာကျောသော ကျောက်တုံးများဖြင့် ထုလုပ်ထားသော ပင်လယ်ရေပုံများ နှင့် ထုလုပ်ထားသော ဧရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အခြားကိစ္စများတွင်မူ ကမ်းရိုးတန်းတွင် ထုံးကျောက်နှင့် သဲကျောက်များကဲ့သို့ ပျော့ပျောင်းပြီး ကြွပ်ဆတ်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အစုအပုံအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အရင်းအမြစ်များစွာသည် ရှေးခေတ်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် အချို့သော ပင်လယ်ရေတိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရုပ်ကြွင်းများကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့အခါ သတိနဲ့ ဆက်လုပ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ မီးပုံကြီးသည် မတော်တဆ ပြိုကျနိုင်ပြီး အနီးနားတွင် ရပ်နေသူ သို့မဟုတ် သွားလာနေသူကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။ ပင်လယ်တောင်ကုန်းတွေတက်တဲ့အခါ နူးညံ့ပြီး ကြွပ်ဆတ်တဲ့ ကျောက်တုံးတွေကို အာရုံစိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည် တောင်တက်သမားများ၏ အလေးချိန်အောက်တွင် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။အထူးသဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းပြီး ပါးလွှာသော အဏ္ဏဝါလိပ်ခေါင်းများသည် အလွန်ပျက်စီးလွယ်သောကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထို့အပြင် ငှက်များသည် အသိုက်အအုံအဖြစ် ပင်လယ်စာစုများကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် ငှက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပင်လယ်စာစုများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
ပင်လယ် အစုအဝေးအားလုံးသည် ချောက်ကမ်းပါး၊ ရေအနည်းငယ်နှင့် အချိန်များစွာ လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ ဒါမှမဟုတ် သန်းချီတဲ့ ကာလတွေပါ။
La ကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားခြင်း သို့မဟုတ် ရေနှင့်လေကြောင့် ကျောက်ဆောင်များ တိုက်စားမှုနှေးကွေးခြင်း။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစုအပုံကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အနီးနားရှိ ကျောက်တုံးများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပင်လယ်ရေ အစုအဝေးများ စတင်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လေနှင့် လှိုင်းများသည် ကျောက်ဆောင်ကို ရိုက်ခတ်ကာ ကွဲသွားကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ တွန်းအားသည် ကျောက်တုံးအတွင်း အက်ကွဲကြောင်းများကို ဖန်တီးကာ တဖြည်းဖြည်း အက်ကြောင်းများသည် ပင်မကျောက်ဆောင်မှ ပြုတ်ကျလာသော အကွဲအပြဲများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
ချစ်ပ်ပြားများ လုံလောက်စွာ ပြုတ်ကျသောအခါ၊ ကျောက်တုံးကြီး၏ တစ်ဖက်မှ နောက်တစ်ဖက်သို့ ဆန့်သော အပေါက်များကို ဖန်တီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် လေနှင့် ရေတို့သည် တစ်ဖက်သို့ ရွေ့လျားသွားကာ ဂူ သို့မဟုတ် ဂူကြီးတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ၊ ဤကျောက်တုံးကြီးသည် မူလကျောက်တောင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပိုင်းခြားကာ ပြိုလဲသွားပါသည်။ ဒါက မင်းရဲ့ပင်လယ်ပုံပါ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤအရာသည်လည်း ပျက်သွားသည်၊ ဘယ်အရာက မီးပုံပြိုကျတာလဲ။ပင်လယ်ငုတ်လို့ ခေါ်တယ်။ ရေသည် ၎င်း၏ခြေရင်းကို ဖြတ်သွားသောအခါတွင် မည်သည့်ပုံမဆို ငုတ်တိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သောကြောင့် တောင်တက်သမားများသည် အစုအပုံများကို သတိဖြင့် ကုသသင့်သည်။
ပင်လယ်အစုအဝေးများကို တိုက်ကြီး ခုနစ်တိုက်လုံးတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ဖန်တီးပုံတွင် သိမ်မွေ့သောခြားနားချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လာဂို့စ်ရှိ ပင်လယ်ကျောက်စုများကို အနည်ကျကျောက်များဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း၊ လှပသောခြစ်ရာများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ဤကျောက်တုံးသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး ကြွပ်ဆတ်သောကြောင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလှိုင်းများပင် တိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်ကို စတင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဥရောပတွင်လည်း၊ စကော့တလန်၏အဓိကကျွန်းဖြစ်သော Orkney ကျွန်းများတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော မြောက်ဂူတန်ရဲတိုက်ကြီးလည်းရှိသည်။ တောင်ထိပ်မှာ အောက်ခြေထက် ပိုကျယ်တာကြောင့် ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ တောင်တက်သမားတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား အထင်ကြီးစရာ ဥပမာများကို တောင်အမေရိက (ဂါလာပါဂို့စ်)၊ မြောက်အမေရိက (နယူးဖောင်လန်၊ ကနေဒါ)၊ အာရှ (ဖန်ငပင်လယ်အော်၊ ထိုင်း)၊ နှင့် အာတိတ်တစ်ဝိုက်၊ ဗစ် (အိုက်စလန်) နှင့် ဖာရိုးကျွန်းစုများကဲ့သို့သော အာတိတ်ဒေသများတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ .
ဤအရာများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တွေ့ရှိနိုင်သော အထင်ကြီးလောက်စရာ ပင်လယ်ရေကန်များထဲမှ အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ချောက်ကမ်းပါးနှင့်မည်သည့်အရပ် ပင်လယ်သည် အချိန်နှင့်အမျှ ဖန်တီးနိုင်သည်၊ ပြီးတော့ လင်းယုန်မျက်လုံး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေက သူတို့ကို တိုက်ကြီး ခုနစ်တိုက်လုံးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အမျိုးမျိုးသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပုံစံများကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်မှာ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို လူသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် ပင်လယ်အစုအဝေးအကြောင်း၊ ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » ပင်လယ်စာစု